Mamorona fampisehoana haingana miaraka amin'ny MacOS Sierra Memories | Avy amin'ny mac aho
Mamorona haingana ny sary mihetsika amin'ny MacOS Sierra Memories
Javier Porcar | | macOS Sierra, Tutorials, maro
Seho slide Safidy miafina bebe kokoa na kely kokoa ao amin'ilay fampiharana sary ho an'ny Mac. Iza no tsy mahalala an'ity safidy ity, fantaro izany azonao atao ny manoratra sarimihetsika miaraka amin'ireo sary ananantsika amin'ny Mac, ampio mozika ao aminy ary safidio ireo anton-javatra hafa, izay ho hitantsika amin'ity lesona fohy ity. Ity fitaovana ity dia hamonjy antsika amin'ny fotoana mihoatra ny indray mandeha, rehefa misy olona ao amin'ny fianakaviana na namana mangataka amintsika hanao horonantsary ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana x na ilay dia y.
Miaraka amin'ny kinova vaovao an'ny Sary tao amin'ny MacOs Sierra, dia hahafahantsika manararaotra ireo rakikira efa napetraka tao amin'ilay faritra jerena (Izay raha ny tokony ho izy, dia marina kokoa noho ny nandrasana, rehefa misafidy isan'andro na isaky ny hetsika ianao), mba hamindrana ny fitiavantsika azy.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy misafidy ny safidy vaovao isika jerena avy amin'ny MacOS Sierra. Ity dia eo amin'ny sisin'ny sisiny, etsy ambany ihany ny sary. Rehefa tafiditra ao dia hiseho ireo rakikira samihafa novokarina. Avy eo dia tsindrio ilay voafantina. Ny iray kisendrasendra dia lalaovina etsy ambany, fa tsy inona izany fa ny sary mihetsika ary ny sary mamorona an'io memoara io dia miseho eo ambany. Ary tsy ho afaka hanavotra azy isika.
Mba hamoronana rakitsary manokana dia tsy maintsy kitiho ny marika plus, izay hita eo an-tampony ary safidio ny safidy fampisehoana slide. Manomboka eo dia manondro raha mahaleo tena ity fahatsiarovana ity na ampahan'ny iray hafa. Amin'ny ankapobeny dia mahaleo tena izy ary avelantsika ho «Fampisehoana slide vaovao». Avy eo dia mamela antsika hanondro ny anaran'ny sary mihetsika, izay amin'ny alàlan'ny default dia ny anaran'ny rakikira.
Raha vao manaiky isika rakikira an'ity hetsika ity no namboarina ary hitondra antsika any amin'ny ampahany lehibe indrindra io, aiza azontsika atao ny manitsy ny horonantsary araka izay itiavantsika azy. Eto isika dia afaka. Eo ambany: manova ny filaharana, mamafa na manampy sary mankany aminay Amin'ny ilany ankavanana: ovay ny faharetany, avelao amin'ny faharetan'ny feon-kira na misafidy ny faharetana voafaritra. Safidio izao manaraka izao:
ary na dia ny hafainganan'ny tetezamita sy ny fitarihan'ny tetezamita, izany hoe, ny "Curtains" eo anelanelan'ny sary sy ny sary.
Rehefa ny tiantsika no tokony hataontsika aondraho ny fitaovana na zarao araka ny itiavantsika azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Mamorona haingana ny sary mihetsika amin'ny MacOS Sierra Memories
Spigen dia manana ny vahaolana tsy hahavery ny AirPods
Apple manitatra ny fahafahan'ny iPad Air 2 sy Mini